१ वर्षमै थपिए एनसेलका १६ लाख फोरजी प्रयोगकर्ता
काठमाडौं । निजी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले १ वर्ष अवधिमा १६ लाख फोरजी प्रयोगकर्ता थपेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार २०७५ वैशाखसम्म एनसेलका फोरजी प्रयोगकर्ता १० लाख ३८ हजार मात्र थिए । अहिले यो बढेर २६ लाख नाघेको छ । टेलिकमले भने १ वर्ष अवधिमा फोरजीका १ लाख ८८...
विदेशका अपरिचित नम्बरबाट धमाधम आउन थाल्यो कल, नउठाउन र कलब्याक नगर्न प्राधिकरणको आग्रह
साउन ९, काठमाडौं (अस) । पछिल्लो समय विदेशका अपरिचित नम्बरबाट नेपालमा कल आउन थालेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यस्ता फोन नउठाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ । केहीदिन यता ल्यान्डलाइन टेलिफोन या मोबाइलमा फोन तथा मिसकल आउने गरेको सेवाग्राहीले गुनासो गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले एक सूचना जारी गर्दै य...
चिकित्सा क्षेत्रका नयाँ प्रविधिहरू
चिकित्सा क्षेत्रका लागि नयाँ प्रविधि निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । प्रविधिको विकासकै कारण असाध्य रोगहरूको उपचार समेत सम्भव हुने गरेको छ । त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित नयाँ आविष्कार र प्रविधिको विकासमा वैज्ञानिकहरू लागिपरेका हुन्छन् । विभिन्न रोग र तिनको उपचार सहज बनाउन प्रविधि सहयोगी सिद्ध हुन...
स्मार्टफोनमा प्याटर्न वा पिनलक भुल्दा के गर्ने ?
काठमाडौं । स्मार्टफोनको प्याटर्न लक भुलेपछि मध्यपुर थिमीका सुमन श्रेष्ठ तनावमा परे, जब लक खोल्न उनको धेरैपटकको प्रयास असफल भयो । त्यसपछि मोबाइल सेट नै बिग्रिएको ठानेर उनी काठमाडौंको न्यूरोडस्थित एउटा मोबाइल रिपेयर सेन्टर पुगे । त्यहाँ रिसेट गरेर सजिलै बनेपछि मात्र उनी ढुक्क भए । सबैजसो मोबाइल प्र...
भीभो भी१५ प्रो
भीभो भी१५ प्रोमा पहिलो एलेभेटिंग फ्रन्ट क्यामेरा प्रयोग गरिएको छ । यसमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रयोग गरिएको छ । एलेभेटिंग फ्रन्ट क्यामेराका अतिरिक्त भी१५प्रोमा एआई ट्रिपल क्यामेरा सेटअप छ, जसले व्यावसायिक फोटोग्राफीका लागि पनि सघाउ पुर्‍याउँछ । यसमा इनडिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट स्क्यानिङको सुविधा...
चीनमा के गर्दै छ गूगल ?
पछिल्लो समय चीनमा गुगलको गतिविधि चर्चाको विषय बनेको छ । गुगलले चिनियाँ सैन्य समूहसँग मिलेर काम गरिरहेको एक अमेरिकी अर्बपति लगानीकर्ता पिटर थियलले बताएपछि यो विषयमा बहस नै भएको छ । यसै सन्दर्भमा उनले यसबारे गुगलमाथि अनुसन्धान थाल्न अमेरिकी सरकारसँग आग्रह समेत गरेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्...
शाओमी एमआई ८ लाइटमा ६ दशमलव २५ इन्चको फुल एचडी प्लस डिस्प्ले छ । यो फोनको स्क्रीन रिजोलुशन २५६० बाई १०८० पिक्सेल छ । शाओमी एमआई ८ लाइटमा टप नोच डिस्प्ले छ भने क्वालकम स्न्यापड्रागन ६६० एआई अक्टाकोर प्रोसेशरको व्यवस्था छ । फोनमा एड्रेनो ५१२ जीपीयू छ । साथै, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा आधारित फिचरहरू प...
पूर्णभक्त दुवाल काठमाडौं । मोबाइल, ट्याब्लेट, ल्यापटप लगायत ग्याजेट अहिले मानवीय जीवनका अभिन्न अंग भएका छन् । सञ्चारबाहेक अध्ययनदेखि मनोरञ्जन तथा दैनिक कार्य सम्पादन गर्न पनि यी उपकरणको प्रयोग हुने गरेको छ । आफ्नो दैनिक दिनचर्याका लागि मानिसहरूले ब्यागमा वा खल्तीमा यी उपकरण बोकेकै हुन्छ । स्मार्टफ...
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले दिएको इन्टरनेट स्पीड आफूले खरीद गरेकोभन्दा कम भएको हो कि भन्ने धेरैलाई लाग्न सक्छ । तर, इन्टरनेट स्पीड सोहीअनुरूप आएको छ कि छैन भन्ने जान्न समय समयमा परीक्षण गर्नुपर्छ । इन्टरनेट स्पीड जति बढाउँदा पनि खासै प्रगति नभएको पनि हुन सक्छ । यस्तोमा सेवा प्रदायकले सबै ठीक छ भन्ने जवा...
काठमाडौं (अस) । स्मार्टफोन तथा दूरसञ्चार सामग्री निर्माता चिनियाँ कम्पनी हुवावेका प्रमुख लियाङ हुआले डिजिटल सेवालाई सहज र समान पहुँचयोग्य बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सन् २०१८ को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै चीनको शनचनमा आयोजित कार्यक्रममा हुआले यस्तो बताएका हुन् । हुवावेले निरन्तर...